सुर्खेतबाट खड्का र थानी विजयी – Sajha Bisaunee
सुर्खेतबाट खड्का र थानी विजयी
नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको सबै मत परिणाम आएको छ । अन्तिम मत परिणाम अनुसार सुर्खेतबाट दुई जनाले केन्द्रीय सदस्यमा बाजी मारेका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका नेता पूर्णबहादुर खड्का र नेता हृदयराम थानी विजयी भएका हुन् ।
खड्का खुलातर्फको २५ जना केन्द्रीय सदस्यको कोटामा विजयी भएका हुन् भने थानी प्रदेशको कोटाबाट विजयी भएका हुन् । सुर्खेत क्षेत्र नंं. १ का सांसदसमेत रहेका खड्काले एक हजार ६ सय ८६ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भए । २५ जनाको कोटामा खड्का १० औं स्थानमा पर्न सफल भएका छन् । यस्तै सुर्खेत क्षेत्र नं. २ का सांसदसमेत रहेका थानी भने प्रदेश नम्बर ६ को कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल भएका छन् । उनले एक हजार ६ सय १२ मत प्राप्त गरे ।
यसअघि कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा नेता खड्काले प्रतिनिधित्व गर्दै अएका थिए । १३ औं महाधिवेशनबाट भने सुर्खेतबाट दुई जनाले कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन् । खड्का यसअघि सह–महामन्त्री थिए भने थानी १२ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका थिए । यसपटकको महाधिवेशनमा सुर्खेतबाट तीन जनाले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, दलित कोटाबाट उम्मेदवारी दिएका सांसद खड्गबहादुर बस्याल भने पराजित भएका छन् । खड्काले शेरबहादुर देउवा प्यानल र थानीले रामचन्द्र पौडेलको प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका थिए ।
खड्का कांग्रेसका निवर्तमान सहमहामन्त्री समेत हुन् । पार्टीको १२ औं महाधिवेशनबाट पनि खड्का खुलातर्फबाटै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनलाई तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सहमहामन्त्रीमा मनोनित समेत गरेका थिए । यद्यपि केही समयअघि उनले सहमहामन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि पार्टीले स्वीकृत भने गरेको थिएन । यसपटक महामन्त्री पदमा उठ्ने चर्चा गरिए पनि अन्तिममा खड्काले केन्द्रीय सदस्यमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । यस्तै प्रदेश नं. ६ बाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका थानीले प्रदेशको कोटामा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजय हासिल गरेका हुन् । थानी राज्य व्यवस्था समितिका पूर्व सभापति हुन् । त्यसैगरी प्रदेश नं. ६ बाट थानीसँगै हुम्लाका जीवनबहादुर शाही पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
सुर्खेतबाट खड्का र थानी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि जिल्लाका कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले महŒवपूर्ण उपलब्धी भएको बताएका छन् । कांग्रेस सुर्खेतका सभापति कमलराज रेग्मीले जिल्लाबाट दुई जना नेता केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्नु जिल्लाको लागि नै गौरब भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘यो सुर्खेत पार्टीको लागि महŒवपूर्ण उपलब्धी हो, अब केन्द्रमा समेत हाम्रो पहँुच स्थापित भएको छ । आउँदा दिनमा कांग्रेसलाई थप बलियो बनाउन केन्द्रमा समेत हाम्रो आवाज पुग्ने भयो ।’ जिल्लाबाट पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा दुई जना पुग्नुले पार्टीलाई मात्र नभइ समग्र जिल्लाको विकास निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने समेत उनको भनाइ छ । साथै उनले सुर्खेत र यो प्रदेशका कार्यकर्ताको मेहेनत र सङ्घर्षका कारण सुर्खेतबाट दुई जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको बताए ।
प्रकाशित मितिः २ चैत्र २०७२, मंगलवार ०७:१०